ပုံတင်ရင်းမပေါ်သင့်တာတွေ ပေါ်သွားလို့ ရှင်းပြနေတဲ့ မမဆောင်းရဲ့ အသံကြောင့်မျက်လုံးတွေပြူးသွားတဲ့ နိုင်လူရဲ့ Tik Tokဗီဒီယိုလေး – Online News Post
ပုံတင်ရင်းမပေါ်သင့်တာတွေ ပေါ်သွားလို့ ရှင်းပြနေတဲ့ မမဆောင်းရဲ့ အသံကြောင့်မျက်လုံးတွေပြူးသွားတဲ့ နိုင်လူရဲ့ Tik Tokဗီဒီယိုလေး
ဇာတ်ပို့ သရုပ်ဆောင် နိုင်လူ က တော့ လူကြမ်း မင်းသား တစ်ဦးဖြစ် သလို ဗီလိန် ဇာတ်ရုပ်တွေ ကိုလည်း ပီပြင် ပြောင်မြောက်အောင် ဖန်တီး စွမ်းရှိသူ ဖြစ်ပါ တယ် ။ သရုပ်ဆောင် တော်လွန်း လို့ ပရိသတ် တွေရဲ့ချီးကျူး မှုကိုပါရရှိနေတဲ့ နိုင်လူက ဗီဒီယို ဇာတ်ကားတွေ နဲ့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးတွေ အများ အပြားကို ရိုက်ကူး ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ လက်ရှိ မှာလည်း နိုင်လူက သူကိုယ်တိုင် ဒါရိုက်တာ အဖြစ်ပါ ဆောင်ရွက် ပြီး ကြော်ငြာတွေ ရိုက်ကူးနေ တာပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ။
အခု ချိန်အထိ တည်ကြည် ခန့်ညားနေ ဆဲဖြစ် တဲ့ နိုင်လူ က တော့ ချစ်ရတဲ့ မိသားစု နဲ့ အတူ သာယာ ပျော်ရွှင်ဖွယ် ကောင်းတဲ့ ဘဝလေး တစ်ခုကို တည်ဆောက် ထားတာ ဖြစ် ပါတယ် ။ လတ်တလောမှာ ဆိုရင် နိုင်လူက Tik Tok ဗီဒီယို လေးတွေ မကြာခဏ ရိုက်ကူးပြီး အောင်မြင် နေတာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ သူများတွေ နဲ့မတူအောင် အိုင်ဒီယာ အသစ်တွေ နဲ့ အပီအပြင် သရုပ်ဆောင် ပြီး ရိုက်ကူးလေ့ ရှိတဲ့ နိုင်လူ့ ရဲ့ Tik Tok ဗီဒီယို တွေက ပရိသတ်တွေ ကြားမှာ ကြည့်ရှုသူ များပြားနေတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။
အခု လည်း နိုင်လူ က မင်းသမီးချောလေး မမဆောင်းရဲ့ အသံကို နောက်ခံ ထားပြီး အခွီတ လိုင်း ဗီဒီယို လေး တစ်ခု ကို ရိုက်ကူးခဲ့ တာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ဒီဗီဒီယို လေး မှာ မမဆောင်း က မကြာသေးခင်ကပဲ ပုံတင်ရင်းနဲ့ မပေါ်သင့်တာ ပေါ်သွား လို့ ပရိသတ်တွေ ကို ပြန်ရှင်းပြ နေတဲ့ အသံကို နိုင်လူက နားထောင် နေတာ ဖြစ် ပါ တယ် ။ ဒါပေမဲ့ လည်း ရုတ် တရက်ကြီး မမဆောင်းပြောချ လိုက်တဲ့ စကား တစ်ခွန်းကြောင့် နိုင်လူပါ မျက်လုံးပြူး သွားခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကဲ ချစ်ပရိသတ် တွေ အတွက် သရုပ်ဆောင် နိုင်လူရဲ့ ဟာသ Tik Tok ဗီဒီယိုလေး ကို ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက်ပါ တယ်နော် … .
crd : swelsone news
ဇာတ္ပို႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ နိုင္လူ က ေတာ့ လူၾကမ္း မင္းသား တစ္ဦးျဖစ္ သလို ဗီလိန္ ဇာတ္႐ုပ္ေတြ ကိုလည္း ပီျပင္ ေျပာင္ေျမာက္ေအာင္ ဖန္တီး စြမ္းရွိသူ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေတာ္လြန္း လို႔ ပရိသတ္ ေတြရဲ့ခ်ီးက်ဴး မႈကိုပါရရွိေနတဲ့ နိုင္လူက ဗီဒီယို ဇာတ္ကားေတြ နဲ႔ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားႀကီးေတြ အမ်ား အျပားကို ရိုက္ကူး ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ လက္ရွိ မွာလည္း နိုင္လူက သူကိုယ္တိုင္ ဒါရိုက္တာ အျဖစ္ပါ ေဆာင္ရြက္ ၿပီး ေၾကာ္ျငာေတြ ရိုက္ကူးေန တာပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။
အခု ခ်ိန္အထိ တည္ၾကည္ ခန႔္ညားေန ဆဲျဖစ္ တဲ့ နိုင္လူ က ေတာ့ ခ်စ္ရတဲ့ မိသားစု နဲ႔ အတူ သာယာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေကာင္းတဲ့ ဘဝေလး တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ ထားတာ ျဖစ္ ပါတယ္ ။ လတ္တေလာမွာ ဆိုရင္ နိုင္လူက Tik Tok ဗီဒီယို ေလးေတြ မၾကာခဏ ရိုက္ကူးၿပီး ေအာင္ျမင္ ေနတာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ သူမ်ားေတြ နဲ႔မတူေအာင္ အိုင္ဒီယာ အသစ္ေတြ နဲ႔ အပီအျပင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ၿပီး ရိုက္ကူးေလ့ ရွိတဲ့ နိုင္လူ႔ ရဲ့ Tik Tok ဗီဒီယို ေတြက ပရိသတ္ေတြ ၾကားမွာ ၾကည့္ရႈသူ မ်ားျပားေနတာ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။
အခု လည္း နိုင္လူ က မင္းသမီးေခ်ာေလး မမေဆာင္းရဲ့ အသံကို ေနာက္ခံ ထားၿပီး အခြီတ လိုင္း ဗီဒီယို ေလး တစ္ခု ကို ရိုက္ကူးခဲ့ တာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ဒီဗီဒီယို ေလး မွာ မမေဆာင္း က မၾကာေသးခင္ ကပဲပုံ တင္ရင္းနဲ႔ မေပၚသင့္တာ ေပၚသြား လို႔ ပရိသတ္ေတြ ကို ျပန္ရွင္းၿပ ေနတဲ့ အသံကို နိုင္လူက နားေထာင္ ေနတာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ဒါေပမဲ့ လည္း ႐ုတ္ တရက္ႀကီး မမေဆာင္းေျပာခ် လိုက္တဲ့ စကား တစ္ခြန္းေၾကာင့္ နိုင္လူပါ မ်က္လုံးျပဴး သြားခဲ့ရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ကဲ ခ်စ္ပရိသတ္ ေတြ အတြက္ သ႐ုပ္ေဆာင္ နိုင္လူရဲ့ ဟာသ Tik Tok ဗီဒီယိုေလး ကို ျပန္လည္ မၽွေဝေပး လိုက္ပါ တယ္ေနာ္ … .
Previous post အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူတွေအရမ်းများသွားတဲ့ သန္တာဗိုလ်ရဲ့ အမိုက်စား အကဗီဒီယို
Next post ချစ်စရာ ကိုယ်လုံးလေးကို အထင်းသားပေါ်လွင်အောင် ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ အမိုက်စားလေး ရိုက်ပြထားတဲ့ G ရဲ့ အသဲယားစရာ ဗီဒီယိုလေး